Tenisy – «Trophée canal plus»: nisongadina ireo mpilalao manana traikefa | NewsMada
Tenisy – «Trophée canal plus»: nisongadina ireo mpilalao manana traikefa
Nanomboka ny sabotsy 16 sy ny alahady 17 novambra lasa teo, teny amin’ny kianja Country club Ilafy, ny fifaninanana «Trophée canal plus», taranja tenisy. Fihaonana natokana ho an’ny sokajy U18, lahy sy vavy. Voahaja ny lojika satria samy nivoaka ho mpandresy avokoa ireo mpilalao sangany sy efa manana traikefa.
Anisan’izany ny fandresena azon’i Finoana, teo amin’ny zazalahy, nanoloana an’i Gautier Quentin, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/1 ; 6/1). Toy izany koa ny nandavoan-dRasolomalala Romeo, an-dRovanantenaina Jhonny, tamin’ny seta, 2 no ho 0 (6/0 ; 6/3). Nahazo fahombiazana ihany koa Rasendra Fenosoa, raha nidona tamin-dRaonimanana Aaron, tamin’ny seta, 2 no ho 0 (6/0 ; 6/0).
Ho an’ny vehivavy indray, resin’i Tsantaniony Iariniaina, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/0 ; 6/0), Rajaobelina Faliana. Manohy ny lalany ihany koa Ravoniandro Fitia, izay nanilika an’Andriamanarivo Mya. 6/1 ; 6/1, nandreseny ity mpifanandrina aminy ity. Toy izany koa, i Nomenjanahary Safidisoa, izay nanilika an-dRaharinosy Miangaly ary Andrianafetra Miarana, nampiondrika an-dRandria Nelly.
Hitohy amin’ny sabotsy 23 sy ny alahady 24 novambra ho avy izao ny fifanintsanana ho an’ity “Trophée canal plus”, ity.